फोटो पठाएर एक लाख रुपैयाँ जित्‍ने हैन त? – MySansar
फोटो पठाएर एक लाख रुपैयाँ जित्‍ने हैन त?
फोटो पत्रकारहरुको संस्था पिजे क्लबले नेपालकै सबैभन्दा बढी पुरस्कार राशी भएको फोटो प्रतियोगिता नेपाल फोटो प्रतियोगिताका लागि फोटो दर्ता खुला गरिएको बताएको छ। फोटो पठाउने अन्तिम समय असार ६ गते (जुन २०) राति १२ बजेसम्म हो। यो नेपालको अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो फोटो प्रतियोगिता हो, जहाँ व्यावसायिक फोटो पत्रकार, पत्रकार र सौखिन फोटोग्राफरका हजारौं फोटो एउटै मञ्चमा भेला हुन्छन्। नेपालभित्र खिचिएका फोटो विश्वका जुनसुकै देशबाट नेपाली नागरिकले पठाएर सहभागी हुनसक्छन्। यसमा ७ वटा विभिन्न विधामा फोटो पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। ‘फोटो अफ द इयर’ विजेताले नगद १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। प्रत्येक विधाका प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलेे नगद क्रमशः ३०, २० र १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। प्रोफेसनलहरुले पठाउने फोटोहरुले नै जित्ला नि हामीले खिचेको के जित्ला र भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। गत वर्ष एक पूजारीले खिचेको फोटोले एक लाख रुपैयाँ जितेको थियो। यसअघि पनि फोटो खिच्ने पेशा नभएका धेरैले पुरस्कार जितिसकेका छन्।
आइएमई र ग्लोबल आइएमई बैंकको मुख्य प्रायोजन तथा नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा हुन लागेको प्रतियोगितामा अर्घाखाँची सिमेन्ट न्यूज फोटो, आइएमएस डेली लाइफ, ३एक्सपिरीयन्स नेपाल कल्चर एण्ड टुरिजम, नेचर एण्ड वाइल्डलाइफ, शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माइल, डिस एक्सन स्पोर्टस र नेप्टोस फोटो स्टोरी गरी सात विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछन्।
प्रत्येक विधामा प्रतियोगीले बढीमा ३ वटा फोटो, फोटो स्टोरीमा बढीमा २ वटा स्टोरी र प्रत्येक स्टोरीमा ४ देखि १२ वटासम्म फोटो दर्ता गर्न पाउनेछन्।
यी हुन् क्याटेगोरीहरु
दैनिक जीवनसम्बन्धी फोटोले मानिसको दैनिकीलाई क्याप्चर गर्छ र समसामयिक विषयलाई उजागर गर्दछ। यस्ता फोटोले सम्झना र मानवीय जीवनका कथाहरुलाई जिवन्त राख्नुका साथै फोटोग्राफी कलालाई प्रस्तुत गर्दछ। (नमूना फोटो : विजय गजमेर)
फोटो, जसले समाचार भनुन। राजनीति, समाज गतिविधि, अर्थ वा खेलकुदका समसामयिक विषयमा आम जनतालाई सुसुचित गर्ने खालका फोटो समाचार फोटोको विधामा समेटिन्छन्। यो विधाका लागि वर्ष २०७० मा क्याप्चर गरिएका फोटो मात्र लायक हुनेछन्। कुनै सञ्चार माध्यममा प्रकासित वा अप्रकासित सबैखाले फोटो स्वीकार्य हुनेछन्। (नमूना फोटो : नभेष चित्रकार)
वन्यजन्तुको सुन्दर पक्षलाई उजागर गर्न यस्तो फोटोग्राफी उपयोगी हुने गर्छ। प्रकृति र वन्यजन्तुको सुन्दरता मात्र नभई त्यसका अन्य सुक्ष्म विषयलाई यस्तो फोटोग्राफीले प्रस्तुत गर्दछ। प्रकृति र वन्यजन्तु विधामा वनस्पति र जनावर, भौगर्भिक प्रकृया, मौसमको अवस्था, पानी, वन्यजन्तु, चट्टान, जंगल वा अन्य प्रकारका प्राकृतिक गतिविधि क्याप्चर हुन सक्छ। (नमूना फोटो : सुवासबहादुर विष्ट)
रमाइलो अनुभुति समेटेका फोटोहरु, जसले खुसी र मानिसका लागि सुखद भविश्यको आशा जगाउन सकोस्- यस्ता फोटोहरुलाई लक्षित गरी यो विधा समावेश गरिएको हो। खासगरी जस्तोसुकै परिस्थितिमा भएपनि हँसिला बालबालिका यसको आकर्षण हुन सक्छन्।
खेलकुदको कुनै प्रतियोगिता वा घटनाको मुख्य क्षणलाई क्याप्चर गरेको फोटो यो विधाका लागि उपयुक्त हुन सक्छ। यो विधामा फोटोले खेलकुदसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्ध राख्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, समर्थक, अधिकारीहरु समेट्न सक्नेछ। (नमूना फोटो : नभेष चित्रकार)
को को हुन् निर्णायक?
दक्षिण एसिया तथा भारतका वरिष्ठ फोटोग्राफर पाब्लो बारथोलोमिओ अध्यक्ष
बाह्रखरी डटकमका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान, वरिष्ठ फोटोपत्रकार, क्लबका संस्थापक अध्यक्ष तथा सदृश्य डटकमका फोटो सम्पादक चन्द्रशेखर कार्की, वरिष्ठ फोटोग्राफर मणि लामा, केयु स्कुल अफ आर्टका कार्यक्रम संयोजक सुजन चित्रकार र एजेन्सी फ्रान्स प्रेस (एएफपी) का फोटोपत्रकार एबम क्लबका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश माथेमा सदस्य।
फोटो पठाउन यहाँ क्लिक गर्नुस्
2 thoughts on “फोटो पठाएर एक लाख रुपैयाँ जित्‍ने हैन त?”
फोटो त पठाउने तर कहाँ? त्यो बारे पनि केही बताई दिनुस न सालोक्य जी
त्यहाँ लिङ्क छ त कहाँ पठाउने भनेर। एक पटक फेरि हेर्नुस् त